Sentaro katirsan Galaadi Oo Laga Sameeyay Abaabulkii Waxbarashada. - Cakaara News
Sentaro katirsan Galaadi Oo Laga Sameeyay Abaabulkii Waxbarashada.
Centerka qaloocan(cakaaranews)Axad 25ka September 2016. Senterada kala ah injiro iyo qaloocan ee hoosyimaada degmada galaadi ee Gobolka Doolo ayaa si balaadhan looga qabtay shirar kaladuwan oo ah abaabulka waxbarashada. Halkaas oo ay kasooqaybgaleen bulshada qaybaheeda kalduwan islamarkaana lagu kala qaatay in caruurta dadoodu gaadhay waxbarashada lageeyo dugsiyada waxbarashada.
Hadaba, mudane Maxamed Yuusuf Xuseen oo ah Hogaamiyaha kooxda iskudhafka ah ee abaabulka waxbarashada kawada Gobolka Doolo ayaa sheegay in ay si heer sare ah uga qabteen shirar kala duwan oo ah abaabulka waxbarashada ceneterada kala ah qaloocan iyo injiro iyagoo shirar kaladuwan layeeshay bulshada qaybaheeda kalduwan sida waalidiinta, odayaasha iyo waliba caruurta.
Sidookale waxaa isna dhankiisa kahadalay madaxa xafiiska waxbarashada degmada Galaadi mudane Maxamed Xuseen Maxmuud oo sheegay in maanta ay soo dhameeyeen abaabulkii waxbarashada ee ahaa in lageeyo dugsiyada waxbarashada ardayda dadoodu gaadhay. Ee lagawaday degmada galaadi. Waxuuna intaa kudaray in maanta kooxda iyo isaguba ay siwadajira ah abaabul uga soo sameeyeen labada center ee kala ah Injiro iyo Qaloocan.
Sikastaba ha ahaa, kooxda iskudhafka ah ee abaabulka waxbarashada ee kasocotay xafiiska waxbarashada DDSI ayaa sheegtay in si nabad iyo caano ah ay ugu socoto shaqooyinkii loo xilsaaray ee ku aadanaa Gobolka Doolo.